भड्किलो बन्दै तीज : गरगहना, कपडा र खानेकुरामा प्रतिष्पर्धा ! – ebaglung.com
भड्किलो बन्दै तीज : गरगहना, कपडा र खानेकुरामा प्रतिष्पर्धा !
२०७५ भाद्र २६, मंगलवार १४:२०	Footer Slider, Top News, अन्य समाचार, विविध
हिन्दु नारीहरू मंगलबार राति दर खाएर बुधबार तीजको व्रत बस्दैछन् । विवाहित नारीहरूले आफ्ना पति र सन्तानको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गरेर तथा अविवाहित युवतीहरूले योग्य पतिको कामना गरी पानी समेत नखाई तीजको व्रत बस्ने प्रचलन पहिले देखि नै चलि आएको हो । नेपाली संस्कृतिमा तीजको अघिल्लो दिन खाइने दरको विशेष महत्व भएको पाईन्छ् । दर भन्नेबित्तिकै माइतीघरमा गएर आमाले बनाएका मीठामीठा खानेकुरा खाने भन्ने मान्यता छ । तर पनि पछिल्लो समय तीज आउन महिना दिन बाँकी रहँदादेखि नै समूह समूह मिली होटल रेष्टुरेन्टहरुमा दर खाने चलन समेत बढेको छ । समयको उतारचडाव सगैँ तीजको अघिल्लो दिन खाइने दरका परिकार र प्रचलनमा पनि धेरै परिवर्तन भएको पाईन्छ ।
हिन्दु वैदिक परम्परा अनुसार व्रत बस्नु अघिल्लो दिन शरीरलाई शुद्ध राख्न शुद्ध खानेकुरा खानुपर्छ । खानाबाटै मन, आत्मालाई शुद्ध राख्ने विश्वास रहेकाले पनि पवित्र कार्य गर्नु अघि खानेकुरामा पनि बिशेष ख्याल राखिन्छ । तीजको अघिल्लो दिन खाने उक्त परिकारलाई दर भनिने अग्रजहरुको भनाई छ । तीज भनेको धार्मिक परम्परासँग जोडिएको पर्व मानिन्छ तर तीजमा खाइने दरको सम्बन्ध आजभोली धर्मसँग भने त्यति धेरै जोडिएको पाइँदैन । पछिल्लो दिन व्रत बस्न अघिल्लो दिन आडिलो खानेकुरा खाँदा व्रतको दिन सजिलो हुन्छ भनेर दर खाने प्रचलन बसेको हो । दरमा खाइने खानेकुराहरू स्वस्थ र पोषणयुक्त हुनपर्छ। तर पछिल्लो समय दरमा महिलाहरूले एकदम चिल्लो पिरोयुक्त माछा मासु, विभिन्न किसिमका गुलियो मिठाईहरु, विभिन्न प्रकारका पेय पदार्थहरू खाने चलन निकै बढेको छ ।अझ आजभोलि घरमा बनाएर भन्दा बाहिर होटल रेष्टुरेन्टहरूमा बनाएको खानेकुरा खाने प्रचलन बढ्दै गएको छ।
हुन त हाम्रो घरमा चाड पर्वहरुमा विशेष खानेकुरा बनाउने चलन चलिआएको छ । यो प्रचलन अचेल घट्दै गएको पाइन्छ । दरको रूपमा तीजको अघिल्लो दिन राति अनादीको चामल,लट्टे, घिउ हालेको खीर जस्ता तागत दिने खानेकुरा खाने चलन छ। तर हिजोआज दरको रूपमा माछा मासु लगायतका खानेकुरा अनि पेयपदार्थ पनि खाने गरेको पाइएको छ। तीजमा व्रत बस्नुलाई धर्मसँग जोडिने भएकाले अघिल्लो दिन माछा मासु खाएर व्रत बस्नु शुद्ध मानिँदैन । व्रत बस्ने अघिल्लो दिन दूध, घिउबाट बनेको चोखो र आडिलो खानेकुरा खानुपर्छ।
माईतीघरमा दिदी बहिनी जम्मा भई आफ्ना सुख दुख साटाँसाट गर्ने,आफ्ना पिर ब्याथा गीत मार्फत ब्यक्त गर्ने प्रचलन चलिआएको हो । आजभोली भने रेकर्डेट तिजका गीतहरु बुफर,साउण्ड सिस्टममा बजाई कम्मर मर्काउने चलन बसेको देखिन्छ । खाने शैलीदेखि तीजका गीतमा मात्र होईन आजभोली लगाउने कपडामा समेत प्रतिस्प्रर्धा देखिन्छ । लगाउने गरगहना देखि लगाउने कपडामा प्रतिस्प्रधा नै छ भन्दा फरक नर्पला । किनकी तिजका बेला महँगा महँगा साडि,गरगहनामा फल्ना भन्दा म के कम,मेरो श्रीमानको कमाइ पनि राम्रो छ,उसको केहि छैन र पनि मेरा भन्दा साम्रा,महँगा छन जस्ता उदाहरण सुन्न पाईन्छ । जसका कारण विभिन्न घटनाहरु घटेका उदाहरण पनि अविस्मरणीय छ । यहि क्रम जारी रहेको खण्डमा यसप्रकारका घटनाहरु नघट्लान भन्न सकिन्न । विभिन्न सन्देशमूलक र भावनात्मक गीत गाउने चलन थियो। अहिले पहिला जस्तो तीजमा नै गाउने निश्चित भाकाहरूमा गीत गाइँदैन, सबै शैलीका गीत गाउने चलन बढेको छ। त्यसैले तीज गीतको संस्कृति बोक्ने खालका गीतहरू हराउँदै गएका छन् । सस्तो लोकप्रियताका कारण हिजोआज उत्ताउलो पाराले तीज गीत गाउने चलन बढेको छ । स्वतन्त्रताको नाममा विकृति बढ्नुका साथै तीज देखावटीका रूपमा मनाउन थालिएको छ ।
पहिलेका नारीहरू विभिन्न कारणहरुबाट पछि परेका थिए,पारिएका थिए,अशिक्षित थिए,सासूव्दारा बुहारीको दमन हुन्थ्यो, स्वतन्त्र थिएनन् । अहिलेका नारीहरु शिक्षित छन,स्वतन्त्र र स्वावलम्बी छन र पनि तीज पछिल्लो समय भड्किलो बन्दै गएको अनुभव गर्न सकिन्छ ।
बुर्तिबाङ,२०७५ भदौ २६ ।
सेती नदी थुनिदाँ पोखरामा बन्यो बिशाल ताल !
बागलुङ ईजलासको परमादेश : ९ मिटर भन्दा बढी सडकको मापदण्ड नबनाउ !